FREDDIE WONG ၏ ROCKETJUMP သည်ရုပ်ရှင်ပညာကိုထောက်ပံ့ရာတွင် VITEC ဗီဒီယိုနှင့်အင်အားစုများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Freddie Wong'S ROCKETJUMP ရုပ်ရှင်ပညာရေးထောက်ခံကြောင်း VITEC VIDEOCOM စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမည်
YouTube ကို Sensation ရဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်းယခု features Vitec Videocom'' s ကို NAB 2016 ထုတ်ကုန်ယဇ်နှင့်ရွက်ပေါက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့အပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ်
Burbank, ကာလီဖိုးနီးယား (မတ်လ 31, 2016) ။ - RocketJump ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်းတစ်ခုအွန်လိုင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး YouTube ကိုအာရုံခံစားမှုအားဖြင့်စတင်ခဲ့အသိုင်းအဝိုင်း Freddie Wongအတူပူးပေါင်းထားပါတယ် Vitec Videocomအဆိုပါ၏, ထိုအသံလွှင့်တိုင်း Vitec Videocom ရဲ့ NAB 2016 ထုတ်ကုန်ဟာယပူဇော်သက္ကာအပါအဝင်လိုင်းထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၏ထိပ်နှင့်အတူရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနဲ့ content ဖန်တီးသူတစ်ဦးမျိုးဆက်သစ်ပညာပေးရန် Group မှ, ။ ကျောင်းများ၏စပွန်ဆာအဖြစ်, Videocom Sachtler, OConnor, Litepanels, Anton / Bauer က Paralinx, SmallHD နှင့် Autocue အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုဂီယာနှင့်အတူ RocketJump ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
ဒင်းကဦးဆောင် Lauren Haroutunian ဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူ မြတ်နိုး Chen က ဒါရိုက်တာ / အယ်ဒီတာ ဂျို Scoma, RocketJump ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်းသားအပေါငျးရှုထောငျ့အပေါ်ထူးခြားတဲ့, ထိတွေ့ဆက်ဆံ, အရည်အသွေးမြင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလဲ tutorial ကိုထောက်ပံ့ပေး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး Direct, တည်းဖြတ်, အသံ, ရုပ်ရှင်ပညာ, ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝငျ။ မေလ 2015 အတွက်ဖြန့်ချိ, ရုပ်ရှင်ကျောင်းမှာရည်မှန်းချက်ကြီးကျောင်းသားများကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒြပ်စင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျွမ်းလာအောင်ကူညီပေးပါအလွယ်တကူလက်လှမ်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အကြောင်းအရာကယ်တင်တတ်၏ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးယင်းပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်။ အွန်လိုင်း format နဲ့အပြတ်အသတ်လူကြိုက်များခဲ့ကြောင်းစတင်ကတည်းက 200,000 စာရင်းသွင်းသူများနှင့်နီးစပ်ဆယ်သန်းအမြင်များအပေါ်ဂုဏ်ယူလျက်ရှိသည်။
[wpdevart_youtube width =” 640″ height =” 385″ autoplay =” 0″ theme =” dark” loop_video =” 0″ enable_fullscreen =” 1″ show_related =” 1″ show_popup =” 0″ thumb_popup_width =” 213″ thumb_popup_height =” 128″ show_title = "1″ show_youtube_icon =" 0″ show_annotations = "1″ show_progress_bar_color =" red "autohide_parameters =" 1″ set_initial_volume = "false" initial_volume = "100″ disable_keyboard =" 0″] RZDJ8 [RZDJXNUMX] RZDJXNUMX
"ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင်ကျောင်းတစ်ဦးကအမာခံသဘောတရားနောက်ဆုံးမှာလက်ပေါ်အတွေ့အကြုံကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းလွယ်ကူသော-to-အတိုင်းလိုက်နာဆန္ဒပြပွဲများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထားရှိခြင်း Vitec Videocom တစ်ဦးစပွန်ဆာသည်ငါတို့အဘို့ဤအဖြစ်မှန်ကိုနှစ်ဦးစလုံးပေါ်နှင့်အော့ဖ်လိုင်း, ကျောင်းပုံဖော်အတွက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်အဖြစ်, "Haroutunian ကဆိုသည်။ "သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအပေါငျးတို့သထက်ပိုမှီခေတ်ပြိုင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့ကဘာလဲဆိုတော့အားကောင်းတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်စေသည်။ "
ကနေအကောင်းဆုံး-In-လူတန်းစားအမှတ်တံဆိပ် Videocom အဆိုပါကဲ့သို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဓိကအရောင်းအပါအဝင်ဒီစပွန်ဆာများအတွက်ပထမဦးဆုံး-rate ကိုပစ္စည်းကိရိယာများပံ့ပိုးနေကြသည် OConnor 1030 စနစ်ကအဖြစ်ဟာသူတို့ရဲ့မြောက်အမေရိကပွဲဦးထွက်စေတော်မူမည်ဟူသော, သစ်ကို Astra ဖျ Bi-အရောင်ကို LED နှင့်အသစ်သော Anton / Bauer Cine စီးရီးဘက်ထရီအပါအဝင် NAB 2016 မှာ featured မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်အသစ်ဟာယပူဇော်သက္ကာ။ Sachtler နှင့် OConnor ပေါ့ပါး payload ကင်မရာ Set-ups မှပိုလေးကနေချောမွေ့စွာအသွင်ကူးပြောင်းမှုကယ်တင်သော 1030 system အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော tripod နဲ့အရည်အကြီးအကဲများပို့ဆောင်နေကြသည်။ အလင်းရောင်အဘို့, RocketJump ကိုလည်းသုံးပြီးဖွစျလိမျ့မညျ Litepanels Astra 1 × 1 LED ယင်းအပြင်ပြား Astra ဖျ Bi-အရောင် LED သူတို့ Anton / Bauer ရဲ့အသစ် Cine စီးရီးဘက်ထရီစွမ်းအားဖြင့်ပါလိမ့်မည်။ Paralinx အသီးသီး 300ft နှင့် 700ft မှတက် compressed လုပ်မထားတဲ့ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ပူဇော်ရာတစ်ခုထရီနှင့် Arrow-X ကို, ပေးနေပါသည်။ နှင့်အဆုံးစွန်အဆင်ပြေဘို့, Autocue ခရီးဆောင်အိုင်ပက် prompters, စဉ်ပံ့ပိုးနေသည် SmallHD 501 On-ကင်မရာမော်နီတာထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများပံ့ပိုးသည်။
"ကျနော်တို့က RocketJump ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဝမ်းသာပီတိနေကြတယ်" ဟုကဆိုသည် Tobias Keuthen, ဒါရိုက်တာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ, Vitec Videocom။ ငါတို့သည်အခွင့်အလမ်းအနည်းဆုံးခုန်ချသူတို့ရဲ့ပညာရေးကြိုးပမ်းကူညီပံ့ပိုးရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောအခါ "ကျနော်တို့ကဒါမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ RocketJump ၏ကြီးမားသောပရိတ်သတ်များခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအ ပူးပေါင်း. နှင့်ပညာပေးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး၏တစ်ဖွဲ့လုံးမျိုးဆက်သစ်နှင့်ရိုက်ကူးရေးအယောင်ဆောင်၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများအချို့ကိုသုံးပြီးနည်းစနစ်အသစ်တွေသင်ယူဖို့ပိုကောင်းတဲ့အရပျမထင်နိုင်ပါသည်။ "
RocketJump ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး school.rocketjump.com ။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် Vitec Videocom အလည်အပတ် vitecvideocom.com.
RocketJump ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထူးပြုကြောင်းကုမ္ပဏီ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မူရင်းက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး, တီဗီရှိုးများနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ FreddieW ယူကျု့ချန်နယ်အဖြစ် 2010 အတွက်ကုမ္ပဏီ၏နှိမ့်ချစကတည်းက RocketJump ကတည်းကစားသုံးသူအသစ်သောမီဒီယာရှုခင်းဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုတိုက်ရိုက်အတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ဟာသူနာမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Freddie Wong, မဿဲအာနိုးနှင့် Desmond ဒျေါလီကပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူ, RocketJump တစ်ဦးတည်း YouTube ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ 1 သန်း subscriber များအားဖြတ်ပြီးဘီလျံခန့် 7.5 ကျော်အမြင်များရရှိခဲ့ကြပြီမူရင်းအရေးယူမှု, ဟာသနှင့်မိသားစု oriented ဗီဒီယိုများရာပေါင်းများစွာတစ် catalog ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဖြည့်စွက်ကာ ဟောလိဝုဒ်VFX-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ဘောင်းဘီတိုနဲ့ web စီးရီး -quality, RocketJump ရုပ်ပြ, ဂိမ်းများ, podcasts နှင့်ပိုပြီး Feature-အရှည်ဟာယပူဇော်သက္ကာအပါအဝင်မီဒီယာသစ်ကိုပုံစံများသို့မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့နေသည်။
အဆိုပါ Vitec Group သည်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံအသင်းစျေးကွက်မှပရီမီယံ branded ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Vitec Group မှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက၎င်း၏ဖောက်သည်အားကိုးသောခိုင်ခံ့သော, ကောင်းစွာမသိ, ပရီမီယံအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အခြေခံသည်။
Cartoni သည် Red Lock System ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် - မတ်လ 2, 2020
ကာတွန်နီသုံးညှပ်များသည် FilmEd အကယ်ဒမီအနုပညာအတွက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်စိတ်ချရသောဖြစ်သည် - ဇန်နဝါရီလ 30, 2020
Cartoni တုတ်၏အကောင်းတစ်ဦးအစုအပေါ်ဖရန့်ဝီလိုဇာနိုရဲ့မစ်ရှင်ကြွင်းသောအရာ - စက်တင်ဘာလ 3, 2019
Anton Bauer ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Freddie Wong isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော LitePanels NAB NAB 2016 OConnor ဒုံးပျံခုန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းမှ rocketjump sachtker ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vitec Videocom 2016-03-31
ယခင်: PrimeTime အားဖြင့် USA တွင်တည်ဆောက်အရည်အသွေးနဲ့ LED စတူဒီယို Lighting
နောက်တစ်ခု: မီဒီယာ့ Prep Technician အ